Bit By Bit - Mifehy - 6.3 Digital dia tsy mitovy
Fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika manana toetra samy hafa ary noho izany dia mametraka fanontaniana samihafa etika.
Ny ankamaroan'ny fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny Analog taona namely mety tsara etika mandanjalanja. Ohatra, ao amin'ny laboratoara ny famerenana ny andrana izay miaraka anjara mihoatra ny 100.000 ny olona, Plott (2013) hita ihany no voka hetsika iray, ny mpianatra izay lasa tezitra noho ny very vola amin'ny lalao ara-toekarena. Toy ny teo aloha telo taona nomerika ohatra, na izany aza, ny mpikaroka ankehitriny miatrika zava-tsarotra etika izay mitovy amin'ny olona tamin'ny lasa. Generalizing avy fianarana telo ireo, Heveriko fa ny tena olana izay tsara fikasa miatrika mpikaroka dia ny fahaiza-manao dia miova haingana noho ny fitsipika, lalàna, ary ny fenitra. More manokana, mpikaroka-matetika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta-hanana fahefana bebe kokoa ny mpandray anjara noho ny tamin'ny lasa. By hery, tiako ho lazaina fotsiny ny fahafahana hanao zavatra ho olona tsy misy ny fankatoavana na ny fanentanana. Ny zavatra aho miresaka momba ny mety ho na mijery ny fihetsika na ny sekoly io azy ireo amin'ny fanandramana. Toy ny herin'ny mpikaroka mba hitandrina sy perturb dia mitombo, misy tsy mitovy fiakaran'ny mazava momba ny fomba izany hery izany no tokony hampiasaina. Raha ny marina, dia tsy maintsy manapa-kevitra ny fomba mpikaroka mba hampiasa ny heriny tsy mifanaraka sy mifototra amin'ny takela-barahina nifanindritsindry fitsipika, lalàna, ary ny fenitra. Mba ho afaka, izany tsy midika fa ny ankamaroan'ny taona nomerika fikarohana dia unethical. Raha ny marina, nomena toe-javatra izany, heveriko fa efa hita mpikaroka tena tsara fitsarana. Ny fitambaran'ny fahaiza-manao sy ny manjavozavo mahery tari-dalana, na izany aza, mametraka tsara fikasa mpikaroka ao anatin'ny toe-javatra sarotra.
Na dia mety tsy hahatsapa manokana mahery indrindra eo amin'ny ny fahafahantsika manao zavatra ho an'ny olona, ​​miha-matetika mpikaroka ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta-manana ny fahaizana hitandrina sy perturb ny olona tsy misy ny fankatoavana na ny fanentanana. Ohatra, sary an-tsaina ny olona manaraka manodidina sy ny firaketana ny zava-drehetra izay ataony. Izany dia ahitana zavatra toy ny Tracking izay mandeha, izay mividy, izay izy miresaka, ary izay mamaky. Ny fanaraha-maso ny olona toy izany teo amin'ny taona Analog nampiasaina mba ho ny zavatra ny fitondram-panjakana amin'ny teti-bola goavana. Ankehitriny, izany rehetra izany dia zatra vaovao, ary ho azy voarakitra momba ny olona an-tapitrisany, ary tsy ela mba ho an'arivony tapitrisa ny olona. Koa, noho izany rehetra izany dia voatahiry nomerika vaovao, dia mora ny mandika, karohy, mamindra, mampiray, sy ny fitehirizana. Amin'ny teny hafa, izay zatra nanao ankehitriny dia fahatairana sy velively mampitolagaga Ady Mangatsiaka, sampan-draharaha misahana mpitsikilo toy ny KGB, CIA, ary Stasi. Ankoatra izany, betsaka ny fihetsika ity ampy no mitranga raha tsy misy ny fahalalana feno ireo izay efa surveilled.
Ny fanoharana mazava tsara fa ampahany sary ny toe-javatra ity ny fanarahamaso faobe dia ny panopticon. Voalohany natolotra tamin'ny faran'ny taonjato faha-18 an'i Jeremia Bentham toy ny trano ho an'ny fonja, ny panopticon dia ny ara-batana fanehoana ny fanaraha-maso (Sary 6.3). Ny panopticon dia boribory trano amin'ny efitra mifantoka manodidina ny foibe Tilikambo Fiambenana. Na iza na iza mitana tilikambo ity dia afaka mandinika ny fitondran-tena rehetra ny olona ao amin'ny efi-trano. Ary, manakiana, ny olona ao amin'ny efi-trano dia tsy afaka mitandrina ny olona tao amin'ny Tilikambo Fiambenana. Ny olona ao amin'ny Tilikambo Fiambenana dia ny tsy hita maso dia toy izany no mpahita (Foucault 1995) .
Sary 6.3: Design avy amin'ny panopticon am-ponja, voalohany naroson'ny Jeremy Bentham. Eo afovoany, misy tsy hita maso mpahita izay afaka mandinika ny fitondran-tena ny olon-drehetra, ary tsy ho hitan'ny. Sary nataon'i Willey Reveley, 1791. Source: Wikimedia Commons .
Raha ny marina, Hafanàm-po an fanaraha-maso dia vao mainka tena noho ny olona ao amin'ny Tilikambo Fiambenana, satria mety mamokatra ny tantara nomerika tanteraka ny fitondran-tena izay azo tehirizina mandrakizay (Mayer-Schönberger 2009) . Raha misy tsy mbola feno firaketana rehetra fitondran-tenan'ny olombelona natambatra ho tompony banky angona, zavatra mihetsiketsika amin'izany tari-dalana. Ary, fa ny hetsika dia mety tena hitohy raha mbola ny fahaiza-manao ny Sela Mpandray Hafanana mbola mitombo, ny vola lany ny fitehirizana mbola hampihenana, ary bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika ho lasa solosaina-fanelanelanana.
Ho maro mpikaroka ara-tsosialy ity banky angona mety tompony voalohany toa mahafinaritra, ary mety tokoa azo ampiasaina ho be dia be ny fikarohana manan-danja. Legal manam-pahaizana, na izany aza, dia nomena anarana hafa ny tompony izao Database: ny base de données ny faharavana (Ohm 2010) . Ny famoronana na dia tsy feno banky angona tompony afaka mifofofofo sy fiantraikany eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-politika raha toa ka ny olona ho vonona ny hamaky sasany fitaovana na hiresaka lohahevitra sasany (Schauer 1978; Penney 2016) . Misy ihany koa ny mety fa ny tompony banky angona, raha noforonina ho an'ny tanjona iray-hoe lasibatra dokam-barotra-mety indray andro azo ampiasaina ho an'ny tanjona hafa, ny toe-javatra antsoina hoe faharoa-ampiasaina. Ny mahatsiravina ohatra ny ampoizina faharoa-fampiasana nitranga nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, rehefa governemanta fanisam-bahoaka data-ny tompony banky angona ny andro-nampiasaina mba hanamorana ny fandripahana izay naka toerana an'i Jiosy, Roma, ary ny olon-kafa (Table 6.1) (Seltzer and Anderson 2008) . Ny statisticians izay nanangona ny tahirin-kevitra mandritra ny fotoana milamina Azo antoka fa nanana fikasana tsara. Fa, raha izao tontolo izao-raha niova ny Nazia tonga teo amin'ny fitondrana tany Alemaina sy ireo firenena manodidina-ity nanampy antontan-kevitra ny faharoa-fampiasana izany dia tsy natao. Indray andro nisy tompony banky angona misy, dia sarotra ny mialoha izay mety hahazo fahafahana miditra ho azy sy ny fomba dia ho ampiasaina.
Table 6.1: Cases izay mponina angon-drakitra rafitra no tafiditra, na mety mandray anjara amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Dia tany am-boalohany io latabatra nangonin'ny Seltzer and Anderson (2008) , ary efa nahitana ny subset ny ny andry. Jereo ny Seltzer and Anderson (2008) Raha mila fanazavana fanampiny momba ny raharaha tsirairay sy ny fampidirana fepetra. Ny sasany, nefa tsy ny rehetra, ireo toe-javatra faharoa tafiditra fampiasana ampoizina.
Lasibatra ny olona na vondrona
Fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​na fanjakana heverina fikasana
Aostralia Faha-19 & am-piandohan'ny taonjato faha-20 Aborigines mponina fisoratana anarana Noterena ny fifindra-monina, singa ny fandripahana foko
Shina 1966-76 Bad-kilasy niandohan'ny revolisiona ara-kolontsaina nandritra ny mponina fisoratana anarana Noterena ny fifindra-monina, nitarika vahoaka herisetra
Frantsa 1940-44 Jiosy Mponina fisoratana anarana, manokana fanisam-bahoaka Noterena ny fifindra-monina, fandripahana foko
Germany 1933-45 Jiosy, Roma, ary ny olon-kafa maro Noterena ny fifindra-monina, fandripahana foko
Hongria 1945-46 Zavatra teratany sy ireo tatitra alemà tenin-dreny 1941 Mponina Census noterena ny fifindra-monina
Pays-Bas 1940-44 Jiosy sy Roma Mponina fisoratana anarana ny rafitra Noterena ny fifindra-monina, fandripahana foko
Norvezy 1845-1930 Samis sy Kvens mponina fanisam-bahoaka fanadiovana ara-poko
Norvezy 1942-44 Jiosy Special fanisam-bahoaka & nanolo-kevitra mponina firaketana Famonoana Ny Mpiray Tanindrazana
Polonina 1939-43 Jiosy Fanisam-bahoaka voalohany indrindra manokana Famonoana Ny Mpiray Tanindrazana
Romania 1941-43 Jiosy sy Roma 1941 Mponina Census Noterena ny fifindra-monina, fandripahana foko
Rwanda 1994 Tutsi mponina fisoratana anarana Famonoana Ny Mpiray Tanindrazana
Afrika Atsimo 1950-93 Afrikana sy ny "miloko" popualtions 1951 Mponina Census & mponina fisoratana anarana Apartheid, mpifidy disenfranchisement
Etazonia taonjato faha-19 Indianina Special fanisam-bahoaka, mponina firaketana noterena ny fifindra-monina
Etazonia 1917 Ahiana ho volavolan-dalàna mandika 1910 Census Fanadihadiana & fitsarana ireo fialana amin'ny fisoratana anarana
Etazonia 1941-45 Anarana Amerikana 1940 Census Noterena fifindra-monina & internment
Etazonia 2001-08 ahiana mpampihorohoro NCES fanadihadiana & fitantanana tahirin-kevitra Fanadihadiana & fanenjehana ny an-toerana & iraisam-pirenena mpampihorohoro
Etazonia 2003 Arabo-Amerikana 2000 Census Unknown
Firaisana Sovietika 1919-39 vitsy an'isa mponina Various mponina fanisam-bahoaka Noterena ny fifindra-monina, sazy amin'ny heloka bevava hafa
Tsotra mpikaroka ara-tsosialy tena, tena lavitra na inona na inona toy ny famoronana eo amin'ny fiaraha-monina mifofofofo sy vokany, na fandraisana anjara ao amin'ny zon'olombelona fanararaotana ka hatramin'ny ambaratonga faharoa-ampiasaina. Aho nifidy ny hiresaka momba ireo lohahevitra, na izany aza, satria mihevitra izy ireo fa hanampy ara-tsosialy mpikaroka hahatakatra ny family alalan 'izany ny olona sasany hahita ny asany. Andao hiverina any amin'ny Andramo, karavato sy Time tetikasa, ohatra. By Nampitambatra miara-tanteraka sy granular angona avy Facebook tanteraka sy granular angona avy any Harvard, ny mpikaroka namorona iray manan-karena Mahagaga jerena ny ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ny fiainana ny mpianatra (Lewis et al. 2008) . Ho maro mpikaroka ara-tsosialy izany toa tahaka ny tompony banky angona, izay azo ampiasaina ho amin'ny tsara. Fa, ho ny sasany, dia toa ny fiandohan'ny ny base de données ny faharavana izay noforonina raha tsy misy ny fanekena ny mpandray anjara. Ny fanandramana, karavato ary Time tetikasa nanomboka tamin'ny taona 2006, ary ny vaovao fa nisy mpikaroka tsy tena manokana. Fa, raha miandrandra kely azonao an-tsaina fa ireny olana ireny dia mety hahazo kokoa ny sarotra. Inona no karazana nomerika Lalàn'i Mosesy, dia ho afaka ny mpikaroka mba hanamboarana ny mpianatra tamin'ny 2026 sa 2046?
Ankoatra ny fanaraha-maso faobe ity, mpikaroka-indray amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta-afaka hirotsaka an-tsehatra amin'ny fomba hatrany eo amin'ny fiainan'ny olona, ​​mba hamorona randomized fanandramana. Ohatra, fihetseham-po areti-mifindra, ny mpikaroka 700,000 voasoratra anarana ao amin'ny fanandramana ny olona tsy misy ny fankatoavana na ny fanentanana. Ary, araka ny voalaza tao amin'ny Toko faha 5 (nihazakazaka fanandramana), ity karazana miafina voantso ho ny mpandray anjara ho andrana dia tsy mahazatra. Ankoatra izany, dia tsy mitaky ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa lehibe. Rehefa voalaza tao amin'ny Toko faha 5, mpikaroka dia afaka mitombo planina sy hanorina dizitaly fanandramana amin'ny zero ny miova vola lany, ny vidiny rafitra izay manome fahafahana tena lehibe fanandramana. Toy ny fahafahana hitandrina, ny fahaizana amin'ny fomba perturb dia azo inoana fa hitombo hatrany.
Manoloana izany nitombo hery, mpikaroka miatrika mifanaraka sy ny takela-barahina nifanindritsindry fitsipika, lalàna, ary ny fenitra. Ny boky iray ity dia tsy mifanaraka fa ny fahaiza-manao ny nomerika taona dia miova haingana kokoa noho ny fitsipika, lalàna, ary ny fenitra. Ohatra, ny iombonana Fitsipika (ny hametraka ny fitsipika mifehy ny ankamaroan'ny fikarohana vatsian'ny governemanta ao amin'ny United States) dia niova firy hatramin'ny 1981. Ny ezaka mba manavao ny Common Fitsipika nanomboka tamin'ny 2011, nefa tsy tanteraka toy ny fahavaratry ny taona 2016. A faharoa loharanom-tsy mifanaraka dia ny fenitra manodidina ny foto-kevitra saro-takarina toy ny fiainana manokana dia mbola mavitrika niady hevitra ny mpikaroka, mpanao politika, sy ny mpikatroka. Raha manam-pahaizana manokana ao amin'ny faritra ireo tsy afaka fanamiana marimaritra iraisana, tsy tokony hanantena hoe empirical mpikaroka na ny mpandray anjara na dia tonga marimaritra iraisana. Ny loharanom-tsy mifanaraka farany dia ny taona dizitaly fikarohana mitombo hatrany ny toe-javatra samy hafa firenena ho any hafa, izay mety mitondra any amin'ny takela-barahina nifanindritsindry fenitra sy ny fitsipika. , Ohatra, areti-mifindra-pihetseham-po dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny angon-drakitra Mpahay siansa ao amin'ny Facebook sy ny mpampianatra sy ny mpianatra nahazo diplaoma tao Cornell. Ao amin'ny Facebook mihazakazaka fanandramana lehibe dia mahazatra raha toa ka manaraka ny Facebook teny amin'ny fanompoana, ary tamin'izany andro izany, tsy nisy fahatelo-antoko famerenana ny andrana. Ao amin'ny Cornell ny fenitra sy ny lalàna dia tena samy hafa; Saika fanandramana rehetra dia tsy maintsy averina ny Cornell IRB. Noho izany, izay napetraka ny fitsipika tokony hifehy areti-mifindra-pihetseham-po ny Facebook sa Cornell ny? Rehefa misy tsy mifanaraka sy takela-barahina nifanindritsindry fitsipika, lalàna, ary ny fitsipika na dia tsara fikasa mpikaroka manana olana mety manao ny zavatra tsara. Raha ny marina, noho ny tsy fifanarahan'ny, dia mety tsy ho iray na dia zavatra tsara.
Amin'ny ankapobeny, ireo endri-javatra roa-mitombo hery sy ny tsy fisian'ny fifanarahana mikasika ny fomba izay fahefana tokony hampiasaina-midika fa mpikaroka miasa ao amin'ny taona nomerika handeha hiatrika zava-tsarotra etika ho an'ny hoavy. Soa ihany fa miatrika ireo fanamby ireo mpikaroka tsy mila manomboka amin'ny rangotra, ratra kely. Kosa, mpikaroka dia afaka manovo fahendrena avy teo aloha lasa fitsipika etika sy ny rafitra, ny lohahevitra ny fizarana roa manaraka.